Kaiurán, obodo nke 300 alakụba na Tunisia | Akụkọ Njem
Nnukwu ụlọ alakụba nke Kairouan | Image Alluring World
Mma, na-adọrọ mmasị, ihe omimi… Kairouan bụ otu n'ime ihe nketa ndị Tunisia. A maara nke ọma dịka "obodo nke alakụba narị atọ", n'ihi ọnụnọ dị ukwuu nke ụlọ arụsị ndị a n'obodo ahụ, ọ bụ isi obodo oge ochie nke ndị eze Aghlabi.
N'ịbụ nke dịpụrụ adịpụ n'ụsọ mmiri na mpaghara ugwu steppe, ọ jupụtara na ihe ncheta akụkọ ihe mere eme dị ịrịba ama. Ọ bụkwa obodo a na-ajụ ajụ nwere ezigbo ọmarịcha ebe ejiri eziokwu mee ihe na ile ọbịa nke ndị ya.
1 Kairouan, obodo dị nsọ nke Islam
2 Kaimara Kairouan
3 Kedu ebe nkiri ndị ọzọ Tunisia nwere?
Kairouan, obodo dị nsọ nke Islam
Foto site na travelin pl
Ntọala gburugburu 670, Kairouan na-eku ume okpukpe ma ọ bụ ya mere ọtụtụ n'ime ụwa Alakụba ji were ya dị ka obodo dị nsọ mgbe Mecca, Fez na Jerusalem, bụ ndị kachasị nsọ na Maghreb. Maka ndị Alakụba, nleta asaa na Kairouan yiri otu nleta Mecca.
Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, aha otutu nke ejiri mara Kairouan: obodo nke narị alakụba atọ. Ruo ogologo oge, amachibidoro ndị na-ekwupụtaghị Alakụba ịbanye ma taa enwere ike ileta ya.
Fọdụ ụlọ alakụba ndị a ma ama bụ ụlọ alakụba nke Barber (Ekwuru na otutu ntutu onye amuma Muhammad bu) ma ọ bụ Zauia nke Sidi Amor Abbada, nke a makwaara dị ka ụlọ alakụba nke Sables (ebe foduru nke onye senti na ihe kachasi ya uto bu mgbidi ya na ulo ya ise).
Agbanyeghị, ihe kachasị amasị bụ nnukwu ụlọ alakụba nke Kairouan nke nwere ihe karịrị ogidi 400 na-akwado ụlọ ya. O nwere nnukwu ụlọ ekpere na ime ime ime ụlọ gbara agba gburugburu na mbara igwe. Site n'èzí, onye ọbịa ahụ ga-enwe ike ịchọpụta na ụlọ alakụba ahụ dị ka ebe siri ike karịa ụlọ okpukpe.
Ili nke ndị nsọ Alakụba n'ọnụ ụzọ ụlọ alakụba malitere na narị afọ nke XNUMX ma na-adọrọ mmasị maka agba ọcha na ọdịdị ha. Nleta na nnukwu ụlọ alakụba nke Kairouan nwere ike mezue ịmara Museum nke ụlọ alakụba, ụlọ nke dị n'ihu ya ebe a gosipụtara ihe dị iche iche metụtara ya dịka seramiki, ihe odide ma ọ bụ atụmatụ n'etiti ihe ndị ọzọ.
Sidi Saheb | Foto Panoramio
Kemgbe 1988 Kairouan abụrụla obodo UNESCO World Heritage n'ihi ịma mma nke n'okporo ámá ya, mgbidi ya, ụlọ okpukpe ya na anwansi nke souks ya.
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ obodo nwere akụkọ ihe mere eme na ihe owuwu ya bụ Islam kpamkpam. Mgbidi ahụ sitere na 1052 na Medina enwere ọtụtụ alakụba, yana ụlọ ahịa na ebe a na-ere ihe ọ cafụ cafụ. Iji nweta ya, ị ga-agabiga Puerta de los Mártires (site na afọ 1772 na n'ụdị Byzantine).
Na Kairouan ị kwesịrị ịga leta zaouias gbasasiri n'obodo ahụ, ụlọ ochie ejiri nye ndị nkuzi mmụọ nyere nkuzi okpukpe. Zaouia oge ochie nke Sidi Abid el Ghariani, Zaouia nke Sidi Amor Abada na Zaouia nke Sidi Saheb (ndị kachasị ewu ewu n'ihi na ọ nwere ili nke enyi nke Muhammad) maara nke ọma.
Nleta dị mkpa na Kairouan bụ ịga leta souks ya na narị afọ nke iri na atọ, ebe ị nwere ike ịzụta ngwaahịa aka dị ka seramiiki, kapeeti, akwa, ọla ma ọ bụ akpụkpọ anụ. N'ime souk akpụkpọ anụ bụ otu n'ime ụlọ kacha ochie n'obodo: Jama Tleta Bibane ma ọ bụ ụlọ alakụba atọ.
Ọ dịkwa mma ileta olulu mmiri Bir Baruta nke dị na ụlọ nke narị afọ nke XNUMX ebe kamel Arabian nọ na-arụsi ọrụ ike na-akwagharị wiilị mmiri iji wepụ mmiri site na mmiri dị n'okpuru ala jikọtara Mecca.
N’akụkọ ihe mere eme ya niile, Kairouan akpaliwo mmasị ọtụtụ mmadụ n’ihi ịma mma ya, mana obodo ahụ dara oge mgbe narị afọ nke XNUMX gachara, dabara na mbuso agha nke ndị na-apụnara mmadụ ihe Hilali. Agbanyeghị, ọ gara n'ihu ịbụ ebe okpukperechi nke usoro izizi wee rue taa.
Kedu ebe nkiri ndị ọzọ Tunisia nwere?
Ọzara na Tunisia | Foto dị na Pinterest
Ọ bụrụ n ’ịga leta Kairouan, ị ka na-eche na ị ka nwere ahụmịhe ibi na Tunisia, lee ụzọ atọ dị ezigbo iche mana ndị pụrụ iche maka ndị njem dị iche iche:
N'iburu n'uche mmụọ ndị Tunisia na-akpali akpali, a pụrụ ịme egwuregwu egwuregwu dị iche iche na mba ahụ. Otu n'ime ihe kachasị njọ bụ nke a maara dị ka ịhapụ, nke mejupụtara ibuga ndị sonyere na mpaghara dịpụrụ adịpụ nwere ụzọ dị mkpa iji lanarị ka ha wee laghachi na mmepeanya.
N'aka nke ọzọ, Tunisia bụ ebe nke abụọ kachasị mma mgbe France natara ọgwụgwọ iodine. Obodo a nwere ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na ndị ruru eru iji ụkpụrụ omume ọma nke oke osimiri mee oke ọnụ ahịa dị oke ọnụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ obi iru ala na ebe a na-ahụ maka thalassotherapy, ọ kachasị mma ịga ụlọ ọrụ dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri ugwu. Otú ọ dị, ndị na-ahọrọ izu ike n'ehihie ma nwee obi ụtọ n'abalị ndị Tunisia, ndị kachasị mma bụ ebe etiti ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ.
Ọzọkwa, ụgbọ mmiri na-eme njem na-ewu ewu na Tunisia n'ihi ihu igwe dị mma na ọdụ ụgbọ mmiri nke ọma. Otu n'ime ndị a ma ama bụ ọdụ ụgbọ mmiri nke Yasmine Hammamet ma ọ bụ Cap Monastir.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Kaiurán, obodo nke 300 alakụba na Tunisia